Rasaasa News – Atoobiya oo Cunaha Haysa Ganacansatada Degaanka Somalida.
on April 7, 2014 12:11 am
Jijiga, Apr 7, 2014 – Marka laga reebo degaanka Somalida, ganacsatada Atobiya hal mar bay bixiyaan canshuur. Alaabta ay ganacsatadu ka iibsato Addis Ababa, waxay toos u gaystaan meesha ay doonayaan iyaga oo aan bixin lacag dheeraad ah.
Hanaanka canshuur bixinta Atobiya ayaa sanooyinkan dambe noqonayey mid leh sharci qoraal ah. Arintaas oo yaraysay lacago si sharci daro ah askartu gaadiidka alaabada sida jidka kaga qaadan jirtay.
Gaadiidka sida alaabta ganacasiga ama isticmaalka shakhsiga ee laga soo raro Addis Ababa, waxay alaabta gayn karaan meel walba oo dalka ah, iyaga oo wata warqada iibka Alaabta.
Laakiin, arintan iyada ah waxaa ka gadisan degaanka Somalida Atobiya oo ay ka jirto sharci daro baahsan. Marka laga tago dagaalka ay Jabhada ONLF kula jirto Atobiya, waxaa kale oo degaanka ka jira arimo muujinaya sharci darada ay Atoobiya ku hayso dadka iyo hantidooda, taas oo ay ku hayso askartu.
Gaadiidka sida alaabta laga soo gaday Addis Ababa, kolka uu soo gaadho Kontroolka Kaaraamardha, waxaa laga qaadaa canshuur. Warqadaha sharciga ah ee lagu soo iibsaday alaabta iyo lifaaqa canshuurtu kama shaqeeyo Degaanka Somalida Atobiya.
Kolka aad canshuur 2aad ku bixiso kontroolka Kaaraamardha, hadan magaalada Jijiga afaafkeeda waxaa taagan askar isugu jirta Taraafik iyo Askar loo yaqaan ilaalada canshuuraha [canshuurta hunguriga]. Waa in aad bixisaa lacag ay dadku ugu yeedhaan fasaxa galida magaalada Jijiga.
Arinta iyada ah dadka samaynaya waa dad Somali ah oo ay daba taagan yihiin askar federaal ah, kuwaas oo aan adiga si toos ah kuula hadlayn. Hadii aad diidana ku xidhi ama la wareegi alaabta. Ma jirto Ilaahay mooyee cid kale oo aad uga dacwoon karto, waayo sharciga Atoobiya iyo xeer Somali midna kama shaqeeyo degaanka.
Meesha 2aad ee Jijiga alaab ganacsi kaga iman karto waa magaalada Xadka ah ee Togwajaale, halkaas oo ay jooto Askarta Federalka iyo turjubaano la shaqeeya. Kolka ay alaab ka keenayaan ganacsatadu waxay bixiyaan canshuur sida Dekada ah, kolka ay waxyar gaadiidka alaabta sidaa soo dhaafaan magaaladana Togwajaale waxaa laga qaadaa canshuurta dal galinta oo aad u badan. Hadana kolka ay Jijiga afaafkeeda yimaadaan, ganacsatadu waxay bixiyaan lacagta magaalo galida. Waxaa yaab leh in kontrool waliba ku siin warqad, warqadaasi wax ay tarina ayna jirin, xisaab ay kuu galina ayna jirin.
Hadii dhaqmaadka Atobiya ee ku wajahan ganacsatada Somalida yahay sharci daro, waxay ganacsatada degaanku go,aansatay in ay qumaati u noqdaan sharci ma dhawrayaal. Taas oo keentay in ganacsatada degaanku xidhiidh suuq-madow ah la yeelato ganacastada reer Somaliland ah, kuwaas oo baabuurta ka soo rara Togwajaale, laaluushana askarta xili habeen ahna keena Alaabta Jijiga.
Ganacsatada magaalada Jijiga waxay ku jiraan nolol celcelis ah oo aan horumar lahayn. Meesha ruuxa ganacsatada Atobiya samayso isbadal muuqda sanooyin ka dib.